The Rohingya News Bank : အစိုးရ
Showing posts with label အစိုးရ. Show all posts
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို အမေရိကန် အစိုးရ အရေး ယူပြီ။
၂၀၁၉ ခု ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်။
မြန်မာ့ တပ်မတော်က ထိပ်ပိုင်း အရာရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လေးယောက်ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပိတ်ဆို့ အရေးယူလိုက်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်တွေ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ စွပ်စွဲပြီး အရေးယူလိုက်တာ ဖြစ်ပါ တယ်။.
အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ ပစ်မှတ်ထား အရေးယူတဲ့ အထဲမှာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဉီးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီး မင်းအောင်လှိုင် လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်, ဘီဘီစီ မြန်မာ, သတင်း, အစိုးရ, အမေရိကန်, အရေးယူ